Tavhunduka Mawadze: Ndikawana mari yekuvandudza basa rangu ndinodzidzisa vamwe vangu vakaremara basa iri vakabatsirika zvikashamisa – Ntu News
September 24, 2021 Jasmin Rose	0 Comments	NtuNews Zimbabwe
Munyori Ruvimbo Ngwetedza/ Nyasha Nhau
Aimbova mudzidzisi anehurema Tavhunduka Mawadze uyo avakuzviitira mabasa ake emaoko zvine mukurumbira munharaunda maanogara kumaruwa emu Kariba mudunhu rashe Musambakaruma mubhuku rasabhuku Dhondoro, rekuveza anotaura iye achiti unyanzvi hwaayinahwo mubasa iri aneshuviro yekuti agodzidzisa vamwe vakaremara vakawana kurarama vachisiya zvekukumbira mumigwagwa vanhu vakashamisika, asi dambudziko riripo ndere mari yekuti avandudze basa rake.
“Ndikawana mari yekuvandudza basa rangu ndinogona kusimuka zvinoshamisa zvikabatsirawo vakawanda vakaremara sezvandakaita, ndingati kuvasumudzira unenge wasumudzira nyika, tinozvikwanisa tiyedzei,” anodero Mawadze.
Mawadze ane makore makumi mana nematanhatu ekuberekwa (46 years of age) ane hurema hwe polio kugumbo reruboshwe ari zvekare muvambi nemutungamiri weboka revakaremara rinonzi Tarirohupenyu Disability Support Group rinova risati ravambwa zviri pamutemo anoti, “ndine mudzimai nevana vana (4) uye muzukuru umwechete.
“Gumbo harina simba ndakaita polio ndine makore maviri ekuberekwa (2 years of age) asi ndinoraramisa mhuri kubva mubasa duku rekuveza randinoita pamusha.”
Achitsanangura nepepa nhau rino re NTU News Zimbabwe matangiro aakaita mubato wemaoko wekuveza maiva mugore ra 2015 achisiya zvehurairidzi (left teaching to start capentry).
“Mukukura kwangu ndaingofarira kuveza, ndini ndaiveza zvinhu zvakaita semajoko, zvituro, migoti nezvimwe zvakasiyana siyana pamusha.
“Pandakamira basa ndakaita ongororo yekuti chii chiri kushaikwa nevanhu munharaunda asi vachichida ndakabva ndaona kuti munzvimbo medu hapana paigadzirwa mudziyo vanhu vaitoenda chinhambwe makiromita mazana maviri kunotsvaga mibhedha, pekurongedzera mbatya, midziyo yakaita sendiro nezvimwe (when I left teaching l discovered that we did not have carpentry services in our community as people would travel more than 200km to buy beds, wardropes and kitchen units among other things).
“Ndakabva ndasangana neumwe mukomana akange abva ku Nyamuroro VTC akaita woodwork takabva tabatana ndokutanga kugadzira midziyo iyi munharaunda yedu vanhu vakagamuchira basa remaoko iri,” akatsanangura.
Mawadze akashanda na Daniel Tadzembwa kwemakore matatu uyo akasiya amudzidzisa kugadzira zvivezwa zvakasiyana siyana achizoenda kunogara ku Chegutu kwaiva kwava kugara vabereki vake, saka anoti akadzidzisawo vana vake uyezve achadzidzisawo vamwe vake vakaremara sekudzidziswa kwaakaitwawo.
Akati iye “sezvo ndaive ndavekugona basa iri handina kumira ndakapfuurira mberi kusvika nhasi uno ndakatozo dzidzisawo vana vangu vavekundibatsira zvakanyanya mubasa iri, chasara kusumudzirawo vamwe vangu vakaremara chava kudikanwa imari yekuti tiwane zvishandiso zvakakwanisira.”
Pabasa rose pane matambudziko anosanganikwa nawo, Mawadze anoti iye basa rake rine zvimhinga mupinyi zvinosanganisira mari yekutangisa mabasa anenge apiwa kuti ayite uyezve ngoro yemoto inozotakurisa zvokushandisa kuti zvireruke kubva kunzvimbo dzekure kwazvinowanikwa.
“Ndinoto nyengetedza vatengi kuti vatange vabhadhara ndozovagadzirira, michina yakakwanira handina, motokari yekutakurisa kubva mu Karoi panova pedo, michina yaveko iyezvino inoda magetsi rinova rimwe dambudziko uyezve pavakudawo kuenda pamasai sai e internet kuti ndikwanisewo kushambadza basa rangu saka pavakudawo laptop.”
Tavhunduka Mawadze anogadzira zvivezwa zvinodiwa nevagari vemunharaunda vakaita sevarimi, vashandi vehurumende, zvikoro, zvipatara, makambani edonje arimunharaunda uye Safari Operators (he make furniture liked and used not only by community people but as well farmers, government workers, schools, hospitals, cotton companies around the area together with Safari Operators).
Ari kuronga kuwana nzvimbo yekuitira bhizimisi pedo neguta panoitirwa nevemabhizimisi makuru, kubva kukanzuru kuitira kuti pfungwa yake yekuva imwe yemakambani makuru mu Zimbabwe igobudirira, achizotengesera zvivezwa muzvikoro zvakava komberedza uye kuti mabasa awanikwe munharaunda kuderedza kushupika kwevanhu kunyanya vakaremara.
← SA administers ‪187 003‬ new COVID-19 vaccines
UK based Mwari Makatendeka hitmaker set to release two prayer singles for Zimbabwe →
October 25, 2021 October 25, 2021 Jasmin Rose	1